I-China 45 HRC Carbide 3 Flute Roughing End Mill abavelisi kunye nabathengisi | Mingtaishun
Ixabiso elipheleleyo lokucoca ibhola ngeempumlo ...
I-HRC ye-Carbide yesi-3 yokuGubungela ukuGubungela iMill Mill
Uyilo olungqiniweyo luphucula ukuqina kunye nokugqiba umphezulu ngokufanelekileyo. Ukusika umda ngaphezulu kweziko kunciphisa ukumelana nokusika. Umthamo ophakamileyo wesibonelelo se-junk slot ukususwa kwe-chip kunye nokwandisa ukusebenza kakuhle kwemishini. Uyilo lweefleyiti ezi-3 lulungile ekususeni i-chip, kulula ekusetyenzisweni ngokuthe nkqo nkqo, okusetyenziswa ngokubanzi kwislot, iprofayili, kunye nokulungiswa kwemingxunya.
I-MTS-3 * 8 * 3 * 50 3 8 3 50 4 0
I-MTS-4 * 10 * 4 * 50 4 10 4 50 4 0
I-MTS-5 * 13 * 5 * 50 5 13 5 50 4 0
I-MTS-6 * 15 * 6 * 50 6 15 6 50 4 0
I-MTS-8 * 20 * 8 * 60 8 20 8 60 4 0
I-MTS-10 * 25 * 10 * 75 10 25 10 75 4 0
I-MTS-10 * 40 * 10 * 100 10 40 10 100 4 0
I-MTS-12 * 30 * 12 * 75 12 30 12 75 4 0
I-MTS-12 * 45 * 12 * 100 12 45 12 100 4 0
I-MTS-14 * 45 * 14 * 100 14 45 14 100 4 0
I-MTS-16 * 45 * 16 * 100 16 45 16 100 4 0
I-MTS-18 * 45 * 18 * 100 18 45 18 100 4 0
I-MTS-20 * 45 * 20 * 100 20 45 20 100 4 0
INDLELA OYALELA NGAYO
Abathengi bathumela imibuzo eneenkcukacha nge-imeyile okanye ezinye iilinki.
2 Siphendula ngexabiso, ukucaciswa, ukupakisha, iifoto kunye nezinye iinkcukacha.
3 Sobabini siyavumelana nexabiso kwaye siqinisekisa iinkcukacha.
4 Sibhala i-invoyisi yeproforma siyithumele kubathengi.
Abathengi aba-5 benza iidipozithi.
Senza iisampulu zemveliso ezininzi.
7 Sithumela iisampulu zemveliso ezininzi okanye sithumele iifoto kubathengi ukuze zamkelwe.
Abathengi 8 baqinisekisa iisampulu zemveliso ezininzi.
Saqala ukuvelisa imveliso ngobuninzi. (sinesitokhwe esikhulu sezona zixhobo zisemgangathweni zisemgangathweni)
10 Sibonisa iifoto zeemveliso ezikulungeleyo okanye abathengi abahlola indawo.
Abathengi benza intlawulo eseleyo.
Ingxelo evela kubathengi ngomsebenzi ongcono kwikamva.
Sinikela ingqalelo kakhulu kwinkonzo yabathengi, kwaye siyabaxabisa bonke abathengi. Sigcine igama elomeleleyo kushishino iminyaka emininzi. Sinyanisekile kwaye sisebenza ekwakheni ubudlelwane bexesha elide kunye nabathengi bethu.
Egqithileyo Ama-HRC angama-45 e-Carbide 2 oMgangatho oPhezulu weeMillings zeAluminiyam
Okulandelayo: I-45 HRC Carbide 3 Mill Floughing End Mill yealumum
I-HRC ye-Carbide 2 yoLungiso loMgangatho oPheleleyo we-Mill ...